Qof noocee ah ayuu ahaa Cali Cabdalla Saalax ? Cali Cabdalla Saalax ayaa saamayn wayn ku lahaa siyaasadda Yemen muddo tobannaan sano ah intii uu madaxweynaha ahaa iyo xitaa markii uu xilka ka dagayba.
Posted by salaad on December 06 2017
Qof noocee ah ayuu ahaa Cali Cabdalla Saalax ? Cali Cabdalla Saalax ayaa saamayn wayn ku lahaa siyaasadda Yemen muddo tobannaan sano ah intii uu madaxweynaha ahaa iyo xitaa markii uu xilka ka dagayba.,,,,,,,,,,,,,,,,,
Saalax wuxuu ahaa siyaasi wuxuuna xulafo la’ahaan jiray madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddaam Xuseen, laakiin taageeradiisii ayuu dhanka Maraykanka u weeciyay wixii ka dambeeyay weerarkii 9/11 wuxuuna ku badashay malaayiin doolar oo gargaar ah.
Laakiin 2dii Dhisembar ayuu Salaax soo jeediyay “in bog cusub la furo” haddii xulafada uu Sacuudigu hoggaaminayo ee taageeraya Hadi ay joojiyaan weerarrada ay ka gaysanayaan dalka Yemen ayna soo afjaraan go’doominta.
Xuutiyiinta ayaa markaas ku eedeeyay in uu “inqilaab” gaysanayo, waxaana billawday dagaal dhex maray taageerayaashiisa iyo kuwa Xuutiyiinta.
Dhacdadaas waxaa aad u ammaanay “oo arrin wayn oo saamayn leh” ku tilmaamay hogaamiyaha Xuutiyiinta, CabduMalik al-Xawti.
Saalax ayaa taageero ka helay qabaa’illadii dagaalamayay, waxaana dad badan oo xaaladda la socday ka yaabisay in mar kale la doortay 1982dii, oo waliba haddana dib loo soo doortay lix sano ka dib.
“Aragagixiso la dagaalanka”